Barnaamij xiiso badan oo laga diyaariyay baarayaasha luuqadaha ee Laanta Socdaalka | Somaliska
Xalay waxaa telefishinka SVT laga sii daayay qeyb ka mid ah barnaamijka Uppdrag Granskning kaasoo baaritaan ku sameeyay sida ay u shaqeeyaan baarayaasha luuqadaha ee ay isticmaalaan Laanta Socdaalka Sweden. Barnaamijka ayaa lagu soo bandhigay in mid ka ah dadka baara luuqada Soomaaliga ee ay isticmaasho Migrationsverket uu beenaale yahay kaasoo u shaqeeya shirkad lagu magacaabo Sprakab.
Laanta Socdaalka ayaa isticmaasha baarayaasha luuqada si ay u xaqiijiyaan halka uu ka yimid qofka magangalyo doonka ah. Baarayaasha ayaa qofka magangalyo doonka ah ku wareysta telefoonka iyaga oo waydiiya su’aalo la xiriira luuqada iyo deegaanka uu sheegtay, iyagoo ka dib macluumaad u soo dira Laanta Socdaalka ay ku sheegayaan in qofkaan uu ka yimid halka uu sheegtay iyo in kale.
Barnaamijka ayaa lagu soo bandhigay wiil Soomaali ah oo sheegtay in uu ka yimid Afgooye balse dadka luuqada baara ay sheegeen in uu ka yimid Somaliland.
Barnaamijka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay in mid ka mid ah baarayaasha luuqada Af-soomaaliga oo magaciisa loo sameeyay kood “EA20” si loo qariyo aqoonsigiisa, uu been ka sheegay waxbarashadiisa isla markaana uu dhowr jeer dambi ka galay Sweden. Ninkaan ayaa qortay in uu ka baxay jaamacada Stockholm balse taasi ayaa la ogaaday in ay been abuur tahay. Ninkaan ayaa baaray kiisas gaaraya 5000.
Ninkaan ayaa xitaa labo goor loo diiday baasaboorka Sweden, isagoo galay dambiyo ay ka midyihiin daroogo, hanjabaad iyo deymo badan oo lagu leeyahay.
Mid ka mid ah kiisaska uu baaray ninkaan ayaa ah wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Jamac kaasoo sheegtay in uu ka yimid Kismaayo balse ninkaan qarsoon ayaa sheegay in uu wiilkaan ka yimid Tanzania ama Kenya. Telefishinka ayaa codka wiilkaan waxay u bandhigaay mid ka mid ah quburada afka Soomaaliga ugu caansan aduunka oo wax ka dhiga jaamacada Rome ee talyaaniga, Pro. Abdalla Omar Mansuur. Ka dib markii uu dhagaystay ayuu cadeeyay in uu wiilkaan ka yimid agagaarka Kismaayo, isagoo la yaabay sida uu ninkaan luuqada baara u go’aamiyay Tanzania.
Telefishinka ayaa ugu dambeyntii u suurto gashay in ay ogaadeen qofka uu yahay EA20,iyagoo xitaa booqday gurigiisa balse uma aysan suurto galin in ay la kulmaan ama ay wareysi la yeeshaan. Telefishinka ayaa sidoo kale si qoto dheer u baaray kiiska Mohamed oo ka yimid Afgooye, iyadoo macluumaadka uu soo gudbiyay EA20 iyo kan uu sheegay Mohamed uu farqi u dhexeeyo iyadoo hadalo qalad ah uu soo gudbiyay ninka luuqada baara.
Laanta Socdaalka ayaa lagu dhaliilay in ay isticmaasho dadka luuqadaha baara oo qarsoon, iyagoo inta badan go’aamadooda ku saleeya macluumaadka ay soo gudbiyaan dadkaan. Halkaan ka daawo Barnaamijka.
abdulqader osman tuure says:
akkakakakaa masha sooqa bakaraha uu ka dhigay xoolo illaah waaye nin weyn cml uma dhaqmin barnamishka waan dawaday waxaa igu yabka badneed yarka afgooye sheganayay ooo aad u sharaxad dagnamada shabelada iyo kan cajalka ka qaday oo ninka ku til mamay inuu ka yimid somaliland iyo malahaan waa waxaan la yabay aad baan ugu farxay marka aan arkay pro¨.mansuur oo fahmay. waxaana hada jeclahay nika in wadanka loo celsho isbuca danbe ayaan sugeynaa insha allaah
Abdifitaah Nur says:
ASC Baafin Madaxa Webbka Somaaliska.com Mr Jimcaale ayaan doon doonayay Mailna waan u soo diyay balse jawaab kama haayo Fadlan Jimaale tel ama sikale aan kuugula soo Xiriirikaro ii sheeg Caawin baan kaga baahanahaye
Waxaa layga helaa jimcale@somaliska.com
walee qofkii walaalkiis oo musaafur ah been ka sheegay uqubadiisa waa ka soo bexee awalba waa shaqo qaldan
Ilaaheey waxaad Jeceshaahy hakuu sahlo oo qeer kugu jiro sxb Mohamed walaahi caloshaa i xanuujisay.
November 13, 2014 at 23:17
a w w mashaa allaah
November 14, 2014 at 09:14
ASC.SALAN KADIB MOWDUUCAAN 5 MAALMOOD KAHOR AYAAN WAXAAN KA AQRIYAY WEBSITE OO AFKA CARABIGE WAX KUQORO OO AKHBAARTE SWEDEN KAHADLO MARKE WAA LAYAABAY WAXAAN KARAADIYI BAL INAAN KAHELO SOMALISKA WAAKA WAAYI WAQTIGAAS WAANA MOWDUUC MUHIMA OO SOMALIDE KHUSEEYO MARKE SIDE UU JIMCAALE UQORAY 100% ISLA SIDAN AYEEY UQOREEN MARKE WAA
Barnaamijkan oo dhan waan daawaday, Wuxuuna ahaa mid xiiso badan runtii.
Somali waa isku mid, Laakin waxaa shaki iga galay aniga lahjada ninka waraysiga ka qadayey wiilka Mohamed. Isaga ayaa u eg qof kayimid waqooyiga Somalia, Jabouti ama Jigjiga. Fadlan sifiican u dhagaysta. Waan qaldanan karaa laakin far baa ii taagan!!!
waxaan ka xumahay canjalada laduubaayo oo lagu tijaabinaayo luqada kan suaalaha laweeydiinaayo xurmaahan kan ka jawaabaayo asigana xurmaahan waxoow ku qasban yahay inoow sheego luqada sideey latahay inoow sheego saaseeytahay ulamajeedo ruux ku xumeey iyl qoowmiyad ku xumeey dadka somalia ha ugaadeen kan laweey diiye iyo kan weeydiiye maqaldana rabi waxoow kuu qora ayaad helee sabar
nin kaan waa niin been badan dad nadamn ayu been kaa sheegaay aniga xiitaa waan kuu jiiraa ee